पाकेको सुन्तला कुहिएर झरेपछि कृषक मर्कामा - Naya Sanchar
Wednesday, January 20, 2021 | ७ माघ २०७७, बुधबार
Reliable News Source From Nepal
नयाँ सञ्चार टिभी
पाकेको सुन्तला कुहिएर झरेपछि कृषक मर्कामा
१९ पुष २०७७, आईतवार १०:५०
पाँचथर । पाकेर बिक्री गर्ने बेलामा सुन्तला कुहिएर झर्न थालेपछि पाँचथरको फिदिम नगरपालिका–७ रानीटारका कृषक मर्कामा परेका छन् । सुन्तला टिप्ने समयमा धमाधम झर्न थालेको र झरेको सुन्तला कुहिएको पाइएपछि कृषक चिन्तित बनेका हुन् ।
सुन्तलाको राम्रो उत्पादन हुने फिदिम–७ रानीटारमा पाकेको सुन्तलाभित्र किरा भेटिने गरेको छ । किराका कारण सुन्तला कुहिएर झरेपछि यहाँका दर्जनौँ कृषक परिवार मर्कामा परेका छन् ।
रानीटारको नाङ्लपा, हाम्फाबुङ, चिउरीबोटे, चकरुम्बा, माक्लुम्बालगायत टोलमा करिब ४०० रोपनी क्षेत्रफलमा लगाइएको सुन्तलामा किरा भेटिएको हो । हाम्फाबुङका कृषक देउबहादुर थेबेका अनुसार सुन्तला टिप्नै नपाई झर्न थालेको छ ।
“पोहोर साल झण्डै चार हजार किलो बेचेको थिएँ”, थेबेले भन्नुभयो, “यस वर्ष टिप्नै नपाई धमाधम सुन्तला झरिरहेको छ । झरेको सुन्तला कुहिएको पाएका छौँ ।”
मुख्य आम्दानीको स्रोतको रूपमा रहेको सुन्तला कुहिएर जाँदा वर्षभरिको आम्दानी समाप्त भएको अर्का कृषक जयबहादुर नेम्वाङले वताउनुभयो ।
कृषकको गुनासोपछि फिदिम नगरपालिकाले प्राविधिक पठाई सुन्तला कुहिएर झर्ने समस्याको अनुगमन गराएको छ । फिदिम नगरपालिकाको कृषि शाखाका प्रमुख यामबहादुर सङ्ग्रौलाका अनुसार सुन्तलामा ‘फ्रुटफ्लाइ’ नामको किराको सङ्क्रमण देखिएको छ ।
झिङ्गाजस्तो यो किराले पाकेको फल कुहाउने गर्छ । “पोथी किराले फल छेडेर भित्र पसी फुल पार्ने काम गर्छ । फुल लार्भा भएपछि सुन्तलालगायत फल कुहाएर क्षति गर्छ”, सङ्ग्रौलाले भन्नुभयो ।
फल नलाग्दै फेरेमेन ट्राप र मालाथिन नामक विषादी मिलाएर छर्केको अवस्थामा यो किराको समस्या नहुने उहाँको भनाइ छ । फलमा लागेको किरा भने नियन्त्रण गर्न नसकिने सङ्ग्रौलाले बताउनुभयो ।
यस वर्ष अत्यधिक वर्षाका कारण सुन्तलाको फल नै कम लागेको थियो । पाकेको सुन्तला पनि विगतका वर्षको जस्तो स्वादिष्ट छैन ।
अधिक वर्षाकै कारण विगतका वर्षको जस्तो स्वाद नभएको जिल्लाको मिक्लाजुङ गाउँपालिका–५ का कृषक रुपा लावतीको भनाइ छ ।
यस वर्ष चाँडै चिसो शुरु हुँदा सुन्तलामा स्वाद नभएको कृषक बताउँछन् । जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहमा सुन्तला उत्पादन हुने गरेको छ । जिल्लाका कुरुम्बा, आङ्सराङ, रानीगाउँ, फाक्तेप, फिदिम, रानीटारलगायत स्थानमा बढी सुन्तला उत्पादन हुने गर्दछ ।
तपाईंलाई यो सामग्री पढ्दा कस्तो लाग्यो ?
सुदूरपश्चिममा सेना, प्रहरीकै रगतले जोगिन्छ स्थानीयवासीको ज्यान
सुनको मुल्य आज कति छ ?
#ओली, #निर्देशन, #पुनःगठन पार्टी कमिटीहरु तत्काल पुनःगठन गर्न अध्यक्ष ओलीको निर्देशन
#काेराेना पछिल्लो २४ घण्टामा थप ३४८ जनामा काेराेना संक्रमण पुष्टि, ४ जनाकाे मृत्यु
#कोरोना नेपालमा तीन जनामा नयाँ प्रजातिको कोरोना पुष्टि
#दुर्घटना बोलेरो दुर्घटनामा एकको मृत्यु, पाँच घाइते
#दुर्घटना दुर्घटनामा एकको मृत्यु, दुई घाइते
७ माघ २०७७, बुधबार ११:४३
बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ काराेबार ?
७ माघ २०७७, बुधबार ११:२६
महिला लिग फुटबलमा आज आर्मी र पुलिस भिड्ने
७ माघ २०७७, बुधबार ११:०७
७ माघ २०७७, बुधबार १०:३९
७ माघ २०७७, बुधबार १०:१६
नयाँ सञ्चार टिभी मनोरञ्जन
‘माया देकै हो’ बजारमा
२९ मंसिर २०७७, सोमबार १८:४२
रचना रिमाल र नमराज ढुंगानाले भने-‘पिरतीमा दम छ’
१९ मंसिर २०७७, शुक्रबार १३:१७
नयाँ सञ्चार टिभी ब्रेकिंग समाचार
अब टिकटकमा पनि प्रधानमन्त्री ओली, यस्ताे छ पहिलाे भिडियाे
१५ मंसिर २०७७, सोमबार १४:३१
कमल खत्रीकाे ‘याद’ बजारमा
१८ कार्तिक २०७७, मंगलवार १३:२७
कनेक्ट मिडिया एण्ड एड्भरटाइजिङ प्रा.लि
सुचना विभाग दर्ता नं: १८६४/०७६-७७
Connect Media and Advertising Pvt. Ltd.
Khahare-1, Kathmandu, Nepal
Phone: 9851195078, 9860923282
अन्य समाचारमूलक सामग्रीका लागि:
E-mail: news@nayasanchar.com, nayasanchaar@gmail.com
Phone: +977-9851195078, 9803520707, 9818002564
नयाँ सञ्चार टिम
सञ्चालक: प्रकाश विशुन्के
व्यवस्थापक: दिलिप के.सी
सम्पादक: सराेज बन्धु
संवाददाता: विपिन महर्जन
स्तम्भकारः इच्छा गुरुङ
फाेटाे/भिडियाे: बाल कुमार गदाल
Copyright © 2021 Naya Sanchar